Ny mampivelatra ny skiing - karazana skiing sy ny toetrany
Ny ririnina dia tsy ny fotoana fialan-tsasatra ihany. Amin'ny fotoan'ny hatsiaka dia afaka hianatra izay skanera ny olona rehetra. Mba hanaovana izany dia mila mividy fitaovana ilaina mialoha ianao ary manam-paharetana. Be dia be ny fihetseham-po tsara sy ny fiampangana ny vatana.
Skiing alpine - inona ity?
Fantatry ny rehetra fa ny fiaramanidina dia iray amin'ny fanatanjahantena amin'ny ririnina, izay manome ny fiakarana amin'ny lanezy amin'ny lanezy manokana. Io no iray amin'ireo karazana asa an - jatony indrindra ho an'ny olona maro manerana izao tontolo izao. Tia malaza izy ao:
Inona ny fivoaran'ny skiing?
Momba ny tombontsoa amin'ity fanatanjahantena ity dia tsy fantatra amin'ny olona vaovao rehetra ny fanatanjahantena . Ny fanatanjahan-tena mahazatra dia manamora ny:
fanatsarana ny fizotry ny metabolic;
fanamafisana ny vondrona rehetra;
mampatanjaka ny vatana;
fisorohana aretina aretim-bovoka;
fanamafisana ny rafi-pitabatabana.
Karazana skiing sy ny toetrany
Misy karazana skiing toy izao:
Slalom - Nalaina avy eny an-tendrombohitra ny lanezy amin'ny alàlan'ny fiaramanidina eny an-dalana miaraka amin'ny 450-500 m. Ny fahasamihafana eo amin'ny haavony eo anelanelan'ny fanombohana sy ny vita dia 450-500 m.
Ny slalom giant dia taranaka an-jatony eo anelanelan'ny iray ka hatramin'ny iray kilaometatra.
Ny famaizana mahery vaika dia famaizana lalina kokoa. Misy ifandraisany amin'ny halavan'ny làlana sy ny fahasamihafana misy eo amin'ny haavon'ny toerana.
Skiing alpine - eto dia afaka mamaritra ny valiny amin'ny fomba maro ny mpandresy.
Inona no ilainao amin'ny skiing?
Izay rehetra manonofy hanandrana ny tenany amin'ny fanatanjahan-tena, dia liana amin'izay fitaovana ilaina ho an'ny kilasy. Ny fiaramanidina eny an-tendrombohitra dia fifaliana, ilaina ny miomana mialoha:
Skiing for skiing . Ilaina ny mividy ski ambony mialoha ny lanjany sy ny haavon'ny mpitaingina. Raha manao izany ianao, dia zava-dehibe ny karazana fitarihana izay natao.
Fikajiana ski - zava-dehibe ny manolotra kiraro marenina.
Masira ski - natao hiarovana ny mason'ny rivotra mahery, mangatsiaka sy ranomandry. Izy ireo dia mamoaka ASCI manerantany, izay mety ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy.
Kitapo ho an'ny mpitaingina - tsara kokoa ny misafidy ireo fitaovana mivalana amin'ny fananana fanamafisana ny fefy. Indrindra indrindra fa ny akanjo toy izany dia manan-danja ho an'ireo izay tia ny sary sokitra amin'ny skiing tendrombohitra.
Skiing Alpine - zava-misy mahaliana
Misy zavatra maro mahaliana momba ny skiing:
Afaka nahazo marika fandresena maro i Crystal Krantz, atleta alemà. Imbetsaka izy no nahatonga azy ho tompondaka tao anatin'ny fifaninanana manokana ary in-dimy tao anatin'ny manodidina. Nandritra ny Lalao Olaimpika, nahazo medaly volamena izy teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena.
Nanjary tompon-daka tamin'ireo atleta lehilahy i Austin Tony Sailer. Nantsoina hoe mpandresy imbetsaka izy. Nahazo medaly volamena i Tony ary nahazo fifaninanana telo.
Ny Austrian Franz Klammer dia nantsoina hoe nandresy dimy amby roapolo tao anatin'ireo fifaninanana tao am-baravarankely.
Anna-Marie Moser-Prell avy any Aostralia dia indroa enimpolo in-droa no nandresy tamin'ny fifaninanana manokana.
Tamin'ny faramparan'ny taonjato faha-19, ny skiing dia nanomboka nampiasa mpitsidika nandritra ny fiakarana mankany amin'ny tampon'ny Alps.
Kintana amin'ny skiing
Raha miresaka momba ny skiing dia tsy azo atao ny manonona ny anaran'ireo atleta nidina teo amin'ny tantara:
Tony Seiler dia antsoina hoe iray amin'ireo atleta malaza indrindra tamin'ny taonjato faha-20. Tamin'ny 1951, nahavita ny ekipa malaza ny Aostraliana. Na izany aza, herintaona taty aoriana dia tapaka ny tongony taorian'ny ratra. Roa taona taty aoriana, noho ny tanjany, dia nahazo ski izy indray mandeha. Manana medaily fito amin'ny Lalao Olaimpika izy ao anatin'izany.
Jean-Claude Killy nandritra ny fahazazany dia zanaka tena nanaintaina. Rehefa nihalehibe izy, dia matetika no narahina ny tsy fahombiazana, saingy tsy nahasakana azy tsy navotsotra ny olana na ny olana hafa, ary tonga tany an-tampon'ny fanatanjahan-tena tiany izy.
Ingemar Stenmark, ny lazan'ny ski dia tsy namela tsy hiraharaha. Ao amin'ny fifaninanana fanatanjahan-tena ataony efatra, izay ny Olympic dia roa.
Mark Girardelli dia teraka tao amin'ny fianakaviana ski, ka ny mpanazatra voalohany sy tokana ihany no Papa.
Ny fitsipiky ny Nordic mandeha an-tongotra ho an'ny zokiolona
Ahoana ny fisafidianana ny ski amin'ny tena?
Ahoana ny fomba hianatra rollerblading?
Longboard - inona no tiany hianarana ny fomba fitetezana ny lavaka?
Lehilahy Aries - ahoana no tokony hitondrany azy?
Mihinam-boankazo ao anaty lafaoro
Sakafo miaraka amin'ny tsaramaso - recipe
Mamono masirasira ny fihinanana holatra
Ilon Mask dia niresaka tamim-pahatsorana momba ilay fiatoana niaraka tamin'i Amber Hurd tamin'ny resadresaka tamin'ny gazetiboky Rolling Stone
Ny akanjon'ny vehivavy Rosiana
Tao anatin'ny efitrano fandraisam-bahiny amin'ny fomba maoderina
Karazana toetra mifanohitra
Chloe Kardashian dia nanamafy tamin'ny fomba ofisialy ny maha-bevohoka azy
Monastir, Tonizia - toetrandro
Miketrano ny mikrôfo
Fikarakarana ny hatsembohana amin'ny olon-dehibe ao an-trano
Mipetraha amin'ny fomba fitenin'ny 20 taona